Yusuf Garaad: January 2015
Saaxiib maanta dareenkaaga la xisaabtan. 2014 maxaad u qabatay ama u tartay danta guud ee Soomaaliya? Lacag aad u baahan tahay ma ku bixisay danta guud? Aqoontaada ma gelisay? Wakhti ma u hurtay? Waxa aad adigu shakhsiyan qabatay ee mira dhalay ee aad sheegan kartaa waa maxay?
Ninka ama gabadha madax ahow is weydii – wakhtigaaga gaadiidka, guriga iyo lacagta laguu siiyay in aad danta guud ugu shaqeyso, sida ay tahay ma u wada gelisay danta guud? Waajibkaaga ma gudatay? Sannadkan ma ka wax qabad wanaagsanaan kartaa kii hore?
Ma jiraan wax aad awooddo oo aad Soomaaliya u qaban karto 2015? Mid am
a laba ama ka badan ma jiraan oo aad libin ka dhigan karto in aad sannadkaan ku biiriso horumarka Soomaaliya?
Soomaaliya Soomaali baa leh. Qof aad ku halleysaa yey jirin horumarinteeda.